Chii chiri chikonzero chekabhoni kuunganidzwa mumotokari spark plugs? -Industry Nhau-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Chii chiri chikonzero chekabhoni kuunganidzwa mumotokari spark plugs?
NaLi Chenyu / hcfire360 Kubvumbi
(1) Iyo nhema kabhoni pane spark plug: kune dema sediment pane iyo spark plug electrode uye mukati, inova kabhoni kuradzika, inowanzo kukonzerwa nemusanganiswa wakakora kwazvo wegesi musilinda.
Iko kuunganidzwa kwekabhoni pamusoro pechinhu chinopinza plug insulator uye pakati pemagetsi kunokonzeresa kukuvara kwemagetsi mukati meinjini mune zvakakomba zviitiko.
Muchokwadi, sediment kana kabhoni kuradzika mumaraki plugs ingori chiitiko chepamusoro, icho chingave chiratidzo chekutadza kwemagetsi kana kwemagetsi kunoenderana neinjini. Mune ino kesi, inofanirwa kuchengetwa munguva.
(2) Iyo sedhiri yemafuta pane iyo plug plug: kana paine mafuta sediment pane spark plug, inoratidza kuti mafuta ekuzora apinda mukamuri yemoto. Kana chete ma plugi ane munhu ane mafuta ane hunyoro, anogona kukonzerwa nezvisimbiso zvemafuta zvevharuvhu.
Asi kana maburi epfarivhari yechuru chega chega chesirinda akanamira neiyi tsvina, zvinoratidza kuti humburumbira hunoratidzika kusvetuka kumusoro nemafuta negasi.
Pane zvikonzero zvakati wandei zvekabhoni sediki mumaraki plugs:
A. Kusarongeka kwemhando yesipula plug;
B. Musanganiswa wakakora zvakanyanya kana mafuta ekuzora mumusanganiswa akawandisa;
C. Kakawanda injini kutanga kana nguva yakareba kutanga;
D. Kumhanyisa kumhanya mashandiro einjini kwenguva yakareba;
E. Mafuta akazora akawandisa muhombodo;
F. Kuwedzeredza kupfeka uye kubvarura kwepiston mhete;
G. Nguva yekuvesa yakanyanyisa.
Zvichakadaro, zvinokonzerwa necabhoni sediment mumativi akasiyana epark plug zvakare akasiyana, ayo anozotsanangudzwa zvakasiyana nenjinjini yeTakumi mune imwe chinyorwa.
Zvisinei nechikonzero, zvinokurudzirwa kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Inotevera Peji: Maitiro ekutarisa iyo injini spark plug modhi?